Bafisa ukuphakamisa ifulegi laseMgungundlovu | News24
Bafisa ukuphakamisa ifulegi laseMgungundlovu
Isithombe:SithunyelweAmalungu eqembu elenza umculo we-Kwaito uPhumlani Madondo kanye no-Cyril Mchunu bathi bafisa ukuthi uMgungundlovu ube yindawo ehlonishwayo emculweni we-kwaito.
BATHI bafuna ukuthi ngelinye ilanga uMgungundlovu udlale indima ebalulekile kumculo we-kwaito.
Abaculi be-kwaito abazinze kwaPata abazibiza nge Le-Team, uPhumlani Madondo, oneminyaka engu-23, kanye no-Cyril Mchunu, yena oneminyaka engu-28, bathi bafuna ukuthi indawo yaseMgungundlovu ibenegama elihloniphekile kuhlobo lomculo we-kwaito ngokuthi wonke amaqembu enza lomculo avela kulendawo asebenze ngokubambisana ukuze kuzoba khona intuthuko kwezomculo.
“Akumele kube khona othi yena ugcono kunomunye, ngaleyondlela singaya phambili,” kusho uMchunu.
Ebeka owakhe umbono ngalolu daba, uMadondo yena uthe okunye okubalulekile ukuhloniphana nanokuthembela kumdali.
Leli qembu liqhube ngokunxusa iziteshi zendawo ukuthi zidlale umculo wakuleli, ikakhulukazi lo owabaculi abasazama ukuzi khandela igama ukuze umsebenzi wabo uzo sabalala izwe lonke.
“Kodwa sinephupho lokuthi ingoma yethu ethi iPhimbo igcine ingenile kwi-Top 10 yakuKhozi FM,” kusho uMchunu.
Bathe iqembu labo lasungulwa ngonyaka ka-2012 emva kokubona ukuthi uma bengahlanganisa amakhona abo okudansa nokucula bengakhulu kwezobuciko.
“Noma sahlangana ngo-2012 kodwa sobabili saqala ukucula ngonyaka ka-2008 sisebenza ngokuhlukana,” kusho uMadondo.
Uqhube wathi basebenza ngokubambisana njengamalungu aleliqembu yingakho bekholelwa ekutheni ukubambisana kwabantu abahlukene kunemiphumela emihle.
“Sesike sasebenza noSandile Zulu, Hostly Deep, uMadiza engomeni yakhe ethi Batshele Bak’thelele, u-Bishop Noise eyakhe ethi Kwaphela Abantu, kanye ne-TT Boys engomeni yabo ethi Koshon’ iLanga.
Ukusebenza nalabantu bonke kusenze sakhanyiseleka ezintweni eziningi ekade singazazi futhi njengoba kungabantu abadala kulendima yomculo kusijabulise kakhulu ukusebenza nabo ngoba sithole ulwazi oluningi esigcine silusebenzisa ukuqopha lezingoma esinazo njenga manje,” kusho uMchunu.
Uqhube wathi izinhlelo zabo zisenkulu kanti futhi bazimisele ukusebenza ngokuzikhandla ukuze bezophakamisa ifulegi laseMgungundlovu kuhlobo lomculo we-kwaito.
UMadondo uthe njenge qembu sebeke bathola ithuba lokunandisa emicimbini eyahlukene la eMgungundlovu.
“Sike sanandisa kwinxanxathela yezitolo yase Edendale, emcimbini kaMafridge, enkundleni yezemidlalo yase Wadley, e-Richmond Victoria Bar, Sprytz Lounge, Casanova, eKhuba’s e-Edendale, e-Y2K kanye nasemcimbini owawuhlelwe umasipala wesifunda uMgungundlovu,” kusho yena.
Ephetha, uMchunu uthe iphupho labo elikhulu ukuthi ngelinye ilanga begcine bekwazile ukusebenzela izinkampani ezinkulu ezinjenge West Ink, Kalawa Jazzmee noma i-Afrotainment.